Fifanenàna amin’ny devoly, anjely ary olo-masina eny amin’ny araben’ny Repoblika Tsheky · Global Voices teny Malagasy
Nankalazaina na dia tamin'ny vanim-potoana komonista aza ny takarivan'ny Md.-Nicholas
Voadika ny 07 Desambra 2019 5:58 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Shqip, فارسی, русский, Español, عربي, Esperanto , Italiano, українська, English
Fihaonana ara-pombandrazana amin'ny Masindahy Nicholas (dadabe noely) sy devoly roa tao Prague 2 tamin'ny alin'ny 5 desambra. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Feno karazam-piantsehatra tsy fahita firy ny arabe sy ny kianjan'ny Repoblika Tsheky tamin'ny takarivan'ny 5 desambra: devoly, anjely ary olo-masina manao satroka lava sy avo. Ny 5 Desambra no takarivan'ny fetin'ny Masindahy Nicholas, ary manamarika fankalazana manokana ho an'ny kilonga tsheky amin'ny volana desambra feno fety.
Eveka kristiana teraka tao an-tanàna grika tao Myra, izay efa ao Torkia amin'izao fotoana, tamin'ny taonjato fahatelo ny Masindahy Nicholas. Nanampy angano maromaro momba ny tantaram-piainany nandritra ny taonjato maro ny filazalazana momba ny olom-pahendrena kristiana. Araka ity iray somary mihoson-drà ity, nisy mpivaro-kena iray namono kilonga mbola bitika telo ary nametraka azy ireo tao anaty barika ka ho amidy toy ny fenkisoa no nandalo tao amin'ny tanànan-dry zareo i Nicholas. Noho ny fahatsapany fa misy zava-tsy mazavazava tao dia natsangany ho velona indray ireo kilonga ireo. Izay angamba tao anatin'ireo hevitra lehibe no mahatonga ny fetin'ny Md Nicholas ao amin'ny Repoblika Tsheky sy ireo firenena eoropeana maro, toa an'i Belzika sy Holandy, ho manana fifandraisaka akaiky amin'ny kilonga.
Ao amin'ny fombandrazana Tsheky, mandeha eny an'arabe ny Md Nicholas ary indraindray mandodòna varavarana, miaraka amin'ny anjely iray sy devoly iray, ary manontany ny ray aman-dreny raha hendry na maditra ny zanaky ry zareo tamin'io taona io. Raha tsara ny valiny, dia mikapokapoka am-pitiavana ny kilonga ny anjely ary mikarakara azy tsara (manolotra fanomezana?). Treronin'ny devoly kosa ny kilonga madinika.
Raisina ho raharaham-pianakaviana ny fety, ary maro ny tanora no manao ny fitafin'ny iray amin'ireo mpiantsehatra telo karazana ireo ary mandehandeha eny amin'ny arabe hanala voly na hampitahotra ny ankizy amin'ny fomba mahay manala azy. Nalaza dia nalaza tokoa izany fety izany hany ka notandremana tao Tshekôslaovakia na dia tamin'ny vanim-potoana komonista aza, na dia noraràna aza ny fankalazana fivavahana eny imasom-bahoaka, satria noheverina fa misy faka tsy ara-pivavahana amin'ny ampahany ao anatiny ao. Amin'izao fotoana izao, ny monisipalite ao an-toerana no mankalaza azy, fa “tsi-ofisialy”, mbola betsaka ireo olon-telo mandehandeha sy mamelona ilay fombandrazana.
Ireto ambany ireto ny sasantsasany amin'ny sary nopihana tamin'ny takarivan'ny 5 desambra 2019, tao Prague mampiseho ireo fomba isan-karazany ankalazan'ny Tsheky ny fetin'ny Md Nicholas.
Devoly matihanina ao amin'ny kianja Wenceslas ao Prague. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Ry telo an'ny monisipaly ao amin'ny kianja Wenceslas ao Prague. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Misava ny fihetsiky ny kilonga ny devoly. Kianja Wenceslas ao Prague. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Heverina ho tsara fitondratena ity kilonga ity ka nahazo fanomezana. Náměstí míru ao Prague. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Ny telo tafavondrona ho azy. Náměstí míru ao Prague. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Ny devoly sy Md Nicholas miaraka maka sary. Náměstí míru ao Prague. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.